ကုန်ပစ္စည်း Parameters ပစ္စည်း · အင်္ကျီအနုပညာစက္ကူ(200gsm-600gsm) · offset စက္ကူ (200gsm-600gsm) · Kraft စက္ကူ (200gsm-600gsm) · စက္ကူအမည်းရောင် (200gsm-600gsm) အရွယ်အစားစိတ်ကြိုက်အရောင်များမည်သည့်အရောင်ရရှိနိုင်သနည်း Shape Round,ရင်ပြင်,စတုဂံ,ဘဲဥပုံ,နှလုံး ,Star Triangle နှင့်အခြားအထူးပုံသဏ္Surာန်မျက်နှာပြင်အပြီးသတ် · Gloss lamination · Matt lamination · ခရမ်းလွန်ရောင်ရမ်းခြင်း · Gold stamping · ငွေတံဆိပ်တုံး · ဖောင်း · Debossed MOQ 1000pcs သည် Eco-friendly ဖြစ်သည်,ရေရှည်,ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်,ရေစိုခံ, ဆီ - အထောက်အထား,…
Product Parameters ကုန်ပစ္စည်းနာမည်စိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်ခြင်းဆဲလ်ဖုန်းအားသွင်းစက်စာရွက်သေတ္တာများနှင့်အတူစက္ကူဘူးလေးထုပ်ပိုးထုပ်ခြင်းစက္ကူပုံးများအရွယ်အစားအရွယ်အစားအားလုံးရရှိနိုင်သည်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအဆင့်မြင့်စက္ကူကုန်ကြမ်းများစစ်ဆေးရန်အဆင့်မြင့်ကိရိယာများ, မင်, ကော်, စသည်တို့. စက္ကူပစ္စည်းများပြန်လည်အသုံးပြုစတော့ရှယ်ယာဒီဇိုင်းစိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းများ, အရောင်များ, အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အရွယ်အစားကိုကြိုဆိုကြသည်, ODM အမှာစာကို OEM အမည်ပေးသည် / ODM …
Suit for all kinds of industry packaging , like Cosmetic,toy,Electronic,gift,အစားအစာ,light,soap,retails.... Our designers and engineers will make your ideas becomeareal subject with the help of our sample making machine. ပစ္စည်း · အင်္ကျီအနုပညာစက္ကူ(200gsm-600gsm) · offset စက္ကူ (200gsm-600gsm) · Kraft စက္ကူ (200gsm-600gsm) · စက္ကူအမည်းရောင် (200gsm-600gsm) Size Customized Colors Any color is available Shape…
With independent R&D team, we have our owe brand. Meanwhile, we can customize any packing boxes based on your requirements. suit for all kinds of industry packaging , like Cosmetic,toy,Electronic,gift,အစားအစာ,light,soap,retails.... Product Name Wholesale custom empty lipstick paper packaging boxes Type Paper boxes Size All sizes are available Quality Control Advanced equipments for testing raw paper, မင်, ကော်, စသည်တို့. Paper…
Our friendly sales team are waiting to help in any way you require, be itarequest for samples or advice on our products. Please contact us for any further information. Item New CMYK paper folding small mascara packaging box for makeup Material offset paper, တောက်ပ / Matt အနုပညာစက္ကူ, သစ်သားအခမဲ့စက္ကူ, CIS ကဒ်, အဖြူရောင်ကဒ်,အနုပညာစက္ကူ, ဆင်စွယ်ဘုတ်အဖွဲ့, စက္ကူ coated,အထူးစက္ကူစသည်တို့ကိုပုံနှိပ်ခြင်း, PMS , အနက်ရောင် &အဖြူရောင်အရောင်ပုံနှိပ်ခြင်း. ပြီးပြည့်စုံသောခညျြနှောငျခညျြနှောငျ , အပ်ချုပ် &ကော်, ကုန်းနှီးချုပ်, အမှုနှင့်စပ်ဆိုင်သော. W-O binding , spiral binding…